Turner Risk – Gold Channel Movies
ယခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားလေးကတော့.. တန်နာ ရစ်ခ် လို့ခေါ်တဲ့ဇာတ်ကားလေးပါ…ဟုတ်ပါတယ် ဇာတ်ကားနာမည်က ဇာတ်ကားရဲ့ character ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ပေးထားတာပါ…
ဇာတ်လမ်း ရဲ့ ပုံစံကတော့… တန်နာဆိုတဲ့ကောင်လေးက ရော်ဘီ ရယ် ဂျိုရီ ရယ် ဆိုတဲ့.. ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲနဲ့တစ်အိမ်ထဲနေနေတာပါ…. ဆိုးတာတစ်ခုက တန်နာက စိတ်ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ပါ…
ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ထူးခြားမှုက.. ဇာတ်လမ်း title ကို turner risk လို့ပေးထားပေမယ့် turner ဆိုတဲ့ကောင်လေးက main character ထဲမှာ ပါမနေတာပါ… ဒါလေးက ကြည့်ရှူသူတွေကို ဖမ်းစားစေတဲ့တစ်ချက်ပါ… ဒါပေမယ့် အဖြစ်အပျက်တွေက.. turner ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာမို့. သူ့ကို main လို့တော့ စဉ်းစားလို့ရပါတယ်…
ကဲဇာတ်လမ်းကတော့.. ရော်ဘီ ဆိုတဲ့ကောင်လေးက သူ့တို့ခြေထောက်ပေါ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အလုပ်ရှာဖို့အတွက်ကြိုးစားနေသူတစ်ယောက်.. အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် သူက တစ်ခြား အလုပ်လာလျောက်တဲ့ ဆက်နဲ့ ကော်နာ တို့ကို တွေ့မိပြီးတော့ ခင်သွားကြတယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အလုပ်လာလျောက်တဲ့နေ့မှာပဲ ကော်နာ က မနက်ပိုင်းမှာ သူ့အစ်ကို ကို ကမ်းခြေမှာထားခဲ့တယ်…
ကံအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့.. ရော်ဘီ အိမ်ကို ကော်နာ ရောက်တဲ့အချိန်မှာ… ရော်ဘီ နဲ့အတူ တန်နာက နေနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်… သူကလည်း တန်နာကို အထက်တန်းကျောင်းတုန်းက.. အနိုင်ကျင့်နေကြ ကိုး.. ဒါနဲ့ပဲ တန်နာ ဘာလုပ်နေလည်းလို့သူ့အခန်းထဲ ဝင်ရှာတဲ့အခါ.. ကော်နာ ကသူ့အစ်ကို သော့လေးကိုတွေ့ခဲ့တော့…. သံသယဝင်သွားတာကနေ… ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလည်း…
တန်နာ ကရော သူတို့အတွကိဘာတွေ စီစင်ထားလည်း… ဘယ်လိုတွေအကွက်ချထားလည်း.. လူငယ်လေးတွေ နဲ့ကလည်း ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ကြမလည်း.. ဘယ်လိုတွေ အခက်အခဲတွေ ဝမ်းနည်းစရာတွေ… ကြေ ကွဲဖွယ်တွေ ရင်ဆိုင်ရမလည်းဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့ ဘဝဆိုတာတွေရယ်…
ဟောဒီလောကမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလည်းဆိုတာ ဖြစ်တက်သလည်းဆိုတာကို ရိုက်ပြထားလို့…အရမ်းကောင်းတဲ့ကားတစ်ကားပါ…
Size – 930MB / 340MB
IMDb Rating 4.8 221 votes
Download Megaup HD ျမန္မာ 350 mb 1 week A Nyo 2
Download Mediafire HD ျမန္မာ 950 mb 1 week A Nyo 2
Download Mediafire SD ျမန္မာ 350 mb 1 week A Nyo 2
Download GDrive HD ျမန္မာ 950 mb 1 week A Nyo 2
Download GDrive SD ျမန္မာ 350 mb 1 week A Nyo 2